Isbadelka Horumarineed Ee Ay Wakaaladda Biyaha Ee Magaaladda Berbera Ku Talaabsatay Muddaddii Uu Xilka Hayey Maareeye Dawlad Abdi Looliye.
Tuesday November 30, 2021 - 04:48:32 in by Super Admin
Siddaynu ka war qabno Biyuhu waxay kow ka yihiin waxyaabaha Aasaasiga u ah nolosha ee noole kastaa aanu
ka maarmi karin daruurina ay u tahay inuu helo waagii beryaba.
Haddaba Magaaladda Berbera ee Xarunta Gobolka Saaxil oo ah Magaalo Xeebeed cimilo kulul oo ay biyaha masuul uga tahay Wakaalada Biyuhu waxa ay soo martay marxalado kala duwan.
Sidda ay noo Sheegeen dadkii ku noloolaa 30 kii Sanno ee u Dambeeyey markii dib dalka Loogu soo noqday waxa Shacabku ay ka dhaansan jireen kaalmo biyo oo kayuu iyo safaaf dhaadheer ay dadku u geli jireen kaas oo ay biyuhu iska go'i jireen markasta.
Halka Maanta Guri kasta ay ugu jirto Qasabad u gaar ah. Maamuladdii kala Dambeeyey ee soo maray Wakaaladda Biyaha ee Berbera midba marxalad iyo xili gaara ayuu kala soo dabaashay hawsheeduna waxa ay ahayd mid qori isku dhiib ah.
Haddaba Maanta Maamulka Wakaaladda Biyaha, Ayaa lagu majiirtaa in ay muujiyeen dedaal iyo wax qabad Weyn Oo Muuqda, wax yaabaha ay qabteena waxa kamid ah.
Joogtaynta Biyaha oo aan go'in 24/7 saac marka laga reebo cilad farsamo oo sida ugu macquulsan ay uga hawl galaan hawl wadeenadda Wakaaladda Biyuhu, Iyagoo og sii siiya Shacabka inta aanay bilaabin.
Biyo gelinta Xaafaddaha Waraaba u taaga, Magaalo Cad, Xudhuunka, iyo ilaa Maansoor oo iminka dhismayaal badani ay ka hir galeen.
Dibu habaynta Xaruunta Wakaaladda oo ay ka dhiseen dhisme Laba Dabaq ah iyo xafiisyo cusub. Dib u habaynta iyo mushahar kordhinta Shaqaalaha Wakaaladda Biyaha Berbera.
Dhamays tirka Ceelal dhawr ah oo la hir geliyay kuwaas oo Magaaladda Berbera ka haqab tiray Baahiyihii Biyaha.
Bedelida Xaawisyada ama Beebabka waaweyn ee qaybiya Biyaha oo duug ahaa kana samaysnaa Sibidh dhaawacyo badanina ay gaadhi jireen kuwaas oo caqabadaha in ay biyuhu go'aan kamid ahaan jiray.
Bedelkoodana Maamuladdii hore ay ku dhiiran waayeen. Dardargelinta u adeegida macaamiisha oo Shaqaalaha Wakaaladda Biyuhu ay heegan ugu jiraan bulshada taas oo Bulshaddu kaga fal celiso baraha Bulshadda maragna ay u tahay.
Gintii iyo Gunaanadkii Wakaaladda Biyaha Berbera, Ayaa kamida Laamaha Dawladda ee adeega iyo Shaqadda Wanaagsan Degmadda Berbera iyo Gobolka Saaxil Waxaana Sabab u ah.
Maamulka iyo Shaqaalaha Wakaaladda Biyaha Berbera Wakhtiyaddii u Dambeeyey ka muuqday isku duubnaan iyo Daacadnimadda ay ka muujiyeen adeega ay u hayaan Shacabka.
Qalinkii Suxufi Gamuute Cumar Ku-joog